Shiinaha supermarket-ka dibadda ayaa u saxiixaya soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Chaoshifa | Zhengcheng
Calaamadaha albaabka ee aadka u xiisaha badan waxaa si gaar ah loogu talagalay dukaamada waaweyn, silsiladaha waaweyn iyo silsiladaha caadiga ah. Sanduuqyada nalka waxaa lagu heli karaa cabbirro kala duwan, midabka iyo astaamaha calaamadaha waa la habeyn karaa.
Magaca badeecada: Calaamadda supermarket-ka bannaanka
1.Qeebta ugu weyn ee sheygan ayaa ah in midabka ugu weyn ee boodhadhku uu madow yahay maalintii, laakiin habeenkii, ka dib marka la shido laydhadhka laydhka, midabka ugu weyn ee sabuuradda ayaa noqda mid cad, oo aad u dhalaalaya isla markaana soo jiita dareenka.
2. Qaybta astaanta iyo sanduuqa nalka waxaa sameeya makiinad fin. Barka midabka looxa ee astaanta ah ayaa gacanta lagu lifaaqay goor dambe.
3. Dhererka boodhadhka calaamadaha ee supermarket-ka guud ahaan waa mid aad u dheer oo aan daruuri ahayn inuu toosan yahay. Doorashada sanduuqa nalka Zhengcheng ayaa si fiican u xallin kara dhibaatadan. Isticmaalka sanduuqa nalka geesku wuxuu leeyahay isbeddel dabiici ah oo aad u qurux badan.
4. Ku rakibida calaamadaha hore ee dukaanka iftiinka waaweyn ee dukaamada waaweyni waxay cuni doonaan koronto badan. Tuubada laydhka ee loo yaqaan 'patent LED' oo loo adeegsaday sanduuqa iftiinka ee Zhengcheng ayaa keydinaya 65% koronto marka la barbar dhigo tuubooyinka caadiga ah ee LED-ka.
Waxaad dooran kartaa sanduuqyada iftiinka ee dhererka ku habboon iyadoo loo eegayo cabbirka dukaanka, oo ku kala bixi sanduuqyada iftiinka ee isku cabirka ah boodhadhka, oo leh farshaxan aad u fiican iyo soo saarista iftiinka lebiska, taas oo sare u qaadaysa sawirka astaanta.
Hore: Dukaan Hore U Saxeex Bakhaarka KH24H
Xiga: Bannaanka hoggaanka looxa ee looxa loo yaqaan 'acrylic signboard'
Calaamadaha Xayeysiinta, Saxeex Farmashiyaha, Saxiixa Boodhka Nalalka Nalalka ah, Vacuum U samaynta Sanduuqa Nalalka Nalalka, Calaamadaha Iftiiminaya, Bannaanka Laydhka Bannaanka Saxeexa,